Induction Heating Automotive Motor
Induction Heating Automotive Motor ho an'ny indostria fampitaovana fanatanjahan-tena
Tanjona hafanana vy hanampiana hifamatotra sombin-tsindrona miendrika tsindrona ary hanampy ny fitaratra.
Fitaovam-bozaka vy, 60 x 60 x 27 (2.4 2.4 x 1.1) mm (in)
Temperatura 260 ° C (500 ° F)
Fitaovana • Rafitra fanamafisana induction DW-UHF-10kW, miaraka amina workhead lavitra misy 1.5 μF tanteraka.
Fomba / fitantarana Ny coil binocular roa-roa no ampiasaina hanefana motera vy roa alohan'ny hanaovana ny tsindrona. Izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny tanjaky ny fifamatorana eo anelanelan'ny sy taratra ny plastika.
• Fotoana haingana kokoa amin'ny fiakaran'ny vidin'ny famokarana mifanohitra amin'ny fatana misy entona. Ny lafaoro dia mila fotoana hafana sy mangatsiaka lava.
• Fiakarana mavesa-danja lehibe
• Mihena ny fikirakirana noho ny toerana misy ny coil fampidirana akaiky ny masinina manamboatra tsindrona.
Sokajy Technologies Tags motor automobile, fanamoriana fiara, fanatobiana avo lenta amin'ny fiara, induction heating auto, Induction Heating Automotive Motor, induction heating motor, RF Post Fikarohana
Induction fanalefahana vy
Fampandrenesana fanasitranana fanolanana Copper Powd